Home Wararka Farmaajo oo u sheegay beesha Caalamka in heshiis laga gaaray Xasuuqii Baydhabo...
Farmaajo oo u sheegay beesha Caalamka in heshiis laga gaaray Xasuuqii Baydhabo iyo Sawiro been abuur ah oo lala wadaagay!
Maalmihii u danbeeysay waxaa magaalada Baydhabo ka socotay barnaamij loogu magacdaray dib u heshiisiin kaas oo ujeedadiisu ahayd in looga hortago qoraal la filayo in ay dhawaan soo saaro Xarunta Qaramada Midoobay u qaabilsan Xaquuqda Aadanaha.
Madaxweyne Farmaajo oo doonayay in uu ka been abuuro shacabka ku dhaqan Baydhabo ayaa ku amray Ra’iisal Wasaare Kheyre in uu qoraal u qoro beesha caalamka gaar ahaan Midowga Yurub kaas oo lagu sheegayo in la soo afjaray qalalaasihii ka dhashay xasuuqii lagu laayay shacabka Koonfru Galbeed oo ka dhacay magaalada Baydhabo.
Barnaamijka dib u heshiisiinta uu waday Gudoomiye Maxamed Mursal aya ujeedadiisu ahayd in sawro laga qaato odoyaasha dhaqanka oo la fadhiya Cabdicasis Lagfta Gareen taas oo lagu muujinayo in laga heshiiyay dhibkii dhacay iyo Xariga Mukhtaar Roobow.
Laakiin beesha caalamka ayaa aad uga warhayso xaalada runta ah ee ka jirta degaanka Koonfur Galbeed iyo been abuurka Gudoomiye Maxamed Mursal.
Waxaaa wax lala yaabo ah in xaflad igu sawir ah la sameeyo iyada oo lagu sheegayo in ay tahay xaflad dib u heshiisiin. Sawirada laga soo qaaday xafalda ayaad ka arkeysaa in dadka joogaa yihiin dhalinyaro laga soo ururuiyay magaalada Baydhbao dhexdeeda.
Waxaa u baahan in la isweydiiyo Yaa heshiinaya? maxaa laga heshinayaa? yaa qaadayo mas’uulyada xasuuqii ka dhacay Baydhabo? Inta Farmaajo ka been abuurayo xaalada rasmiga ah ee ka jirta deegaanka Koonfur Gabeed aad ayaa ay u adkaanaysaa xal u helitaanka qalalaasaha Siyaasadeed iyo mida amni ee ka jiraa Koonfur Galbeed.